Global Aawaj | कोरोना संक्रमणबाट लुम्विनी प्रदेशमा कहाँ कतिको मृत्यु? कोरोना संक्रमणबाट लुम्विनी प्रदेशमा कहाँ कतिको मृत्यु?
१ जेष्ठ २०७८ 7:24 pm
बुटवल । कोरोना संक्रमणबाट लुम्विनी प्रदेशमा हाल सम्म १ हजार ३५ जनाको मृत्यु भएको छ । भने कुला संक्रमित मध्ये ६८ प्रतिशतले कोरोना जितेका छन । लुम्विनी प्रदेश , स्वास्थ्य निर्देशनालयको पछिल्लो तथ्याङक अनुसार कोरोना संक्रमणबाट प्रदेशभर मृत्यु हुने महिलाको संख्या ३५९ जना रहेको छ ।
पुरुषको संख्या ३ सय ७६ जना रहेको छ । जस मध्ये १५ बर्ष मुनीका एक जना मात्रैको मृत्यु भएको छ । १६ देखि ५९ बर्ष सम्मका मृतकको संख्या ६ सय ४२ जना रहेका छन । ६० बर्ष माथीका ३ सय ९२ जना रहेका छन । यस प्रदेशका १२ वटा जिल्ला मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या रुपन्देहीमा बढि छ । त्यस जिल्लामा हाल सम्म महिला १ सय २८ , पुरुष २०१ सहित कुल ३ सय २९ जनाको मृत्यु भएको छ । रुपन्देही पछि मृत्यु हुनेको दोश्रो ठुलो संख्या बाँके जिल्ला रहेको छ । बाँकेमा हाल सम्म ९२ जना महिला , पुरुष १ सय २८ सहित कुल २ सय २० जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेको तेश्रो ठुलो संख्या दाङ्ग रहेको छ ।
त्यहाँ हाल सम्म ४५ महिला , पुरुष ८५ सहित मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ३० जना पुगेको छ । मृत्यु हुनेको चौथो ठुलो जिल्ला कपिलवस्तुमा २७ महिला ६७ पुरुष सहित ९४ जनाको ज्यान गएको छ । त्यस पछि नवलपरासी (पश्चिम ) मा हाल सम्म महिला १९ पुरुष ३९ सहित कुला ५८ जनाको मृत्यु भएको छ । वर्दियमा १५ महिला , ३७ पुरुष सहित कुल ५२ जनाको मृत्यु भएको छ । पाल्पामा हाल सम्म १५ महिला, ३६ पुरुष सहित ५१ जनाको मृत्यु भएको छ । गुल्मीमा ७ महिला , ४१ पुरुष सहित ४८ जनाको मृत्यु भएको छ । अर्घाखाँचीमा ७ महिला , २५ पुरुष सहित २५ जनाको ज्यान गएको छ ।
प्युठानमा एक महिला १४ पुरुष सहित १५ जनाको मृत्यु भएको छ । रोल्पामा ३ महिला ३ पुरुष सहित मृत्यु हुनेको संख्या ६ पुगेको छ । रुकुम पश्चिम भने मृत्यु दरमा शुन्यमा छ । हाल सम्म प्रदेशभर ६०९६६ जना संक्रमित मध्ये ४१ ह्जार ४ सय ९७ जनाले कोरोना जितेका छन । १८ हजार ४ सय ३० जना संक्रिय संक्रमित रहेका छन । १७ हजार १ सय ५१ जना होमआईसोलेशनमा छन । ८ सय ९८ जना संक्रमितले कोभिड अस्पताल तथा निजी अस्पतालमा उपचार गराई रहेका छन । ३ सय ८१ जना आईसोलेशन सेन्टरमा उपचार गराई रहेका छन । प्रदेशभर १ सय १३ वटा आईसोलेशन छन । जसमा १७ सय ५३ वटा शैया छन ।